Chọpụta ihe ị ga-ahụ na Oyambre Beach na Cantabria | Akụkọ Njem
Oyambre osimiri dị na Cantabria
Susana Garcia | | España, General, Osimiri
Na Obodo Cantabria anyị nwere ike ịchọta oke osimiri dị egwu na ọdịdị ala, na-eme ka o sie ike ịhọrọ otu n'ime ha. A na-ahụta Oyambre Beach dị ka ihe kachasị mma ma ọ bụ ya mere na anyị ga-ekwu maka ya na gburugburu ebe ọ dị. Ọ bụ ụsọ osimiri dị na obodo Valdáliga na San Vicente de la Barquera.
La osimiri mara mma nke Oyambre bụ ezigbo ebe mara mma N'ihe dị ka kilomita abụọ n'ogologo nke ahụ bụ nleta dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị nọrọ San Vicente de la Barquera, ebe mara mma nke ndị njem nleta. Ọ dị n'ime Oyambre Natural Park ma yabụ nwekwara nnukwu uru obibi.
1 Uzo esi aga Oyambre beach
2 Oyambre Natural Park
3 Osimiri Oyambre
4 Ebe dị nso
Uzo esi aga Oyambre beach
Nke a osimiri dị na ebe dị mfe ịnweta ebe ọ bụ na ọ dị nso na Santander. Ọ bụrụ na ị rutere na Santander ị nwere ike were A-7 gaa Torrelavega wee gaa A-8 gaa San Vicente de la Barquera. Mgbe anyị rutere n’obodo a, anyị ga-ewere okporo ụzọ CA-236 nke na-akpọga anyị ozugbo na Oyambre Natural Park na oke osimiri a mara mma. Site na Asturias anyị nwekwara ike isi n'okporo ụzọ E-70 gawa A-8 gaa San Vicente de la Barquera. Ọ dị mfe iji obodo dị iche iche wee banye n'obodo a n'ihi na okporo ụzọ awara na-agafe na ya, yabụ ị ga-erute n'akụkụ osimiri dị mfe.
Osimiri a dị n'ime ogige ntụrụndụ mara mma. A na-ekesa ogige a n'etiti obodo dị iche iche, Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga na Val de San Vicente. Oghere a abụwo ogige okike kemgbe 1988. Ogige a na-agụnye estuaries nke San Vicente estuary na Rabia estuary. Ọ bụ ihe ndị e kere eke na mpaghara dị n'ụsọ oké osimiri ebe anyị nwere ike ịchọta dunes, oke ohia na oke ugwu nwere osisi na ahịhịa na-enweghị atụ. N'ebe a, ị ga - ahụ ọtụtụ nnụnnụ mmiri nke zuru ike na mpaghara ahụ n'oge njem.
Nke a bụ ụsọ osimiri nke ezigbo aja aja na oke mmiri. Anyị maara na osimiri ndị dị na Cantabria na-emeghe nke ọma ma na-apụta ìhè maka ịnwe ebili mmiri, ya mere ha bụ zuru oke maka egwuregwu dika sọọfụ ma ọ bụ ikuku ikuku. Banyere ọrụ ya, enwere ọdụ ụgbọ ala dị nso na ọ ga-ekwe omume ị nweta ebe ụgbọ njem ọha, ma ọ dịkarịa ala n'oge. E nwere ebe a na-ama ụlọikwuu ma n'oge oge ị nwere ike ịchọta ụlọ mmanya n'akụkụ dị nso iji zụta ihe ga-ajụ oyi. Ebe ọ bụ na ọ bụ osimiri a ma ama ma mara mma nke ukwuu, ọrụ ọ na-arụ bụ nkezi. N'ihe banyere ezinụlọ, ọ dị mkpa ịkpachara anya mgbe niile maka ebili mmiri n'ihi na dabere na ụbọchị anaghị atụ aro ka ụmụaka saa ahụ. Na oge enwere ọrụ nchekwa ndụ. Anyị kwesịrị iburu n'uche ọkọlọtọ na-efe n'ihi na ha na-agwa anyị ma anyị nwere ike ịsa ahụ ma ọ bụ na ọ nwere ike ịdị egwu. A na-ahapụ ịsa ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ị ga-eji odo odo kpachara anya ma jiri ọkọlọtọ ọbara ọbara ka mma ịghara ịsa ahụ. N'aka nke ọzọ, a machibidoro ụfọdụ mmachi iwu, n'ihi na anaghị anabata nkịta n'ụsọ osimiri, ị gaghị enwe ike igwu bọọlụ ma ọ bụ shọvel ma ọ bụ tụfuo ihe mkpofu.
Osimiri a mara mma nke ukwuu mana ọ na-enyekwa anyị ohere ịhụ ụfọdụ ebe dị nso maka nlegharị anya. E nwere osimiri ndị ọzọ dị nso, dị ka El Cabo beach na San Vicente de la Barquera ihe dị ka kilomita abụọ ma ọ bụ osimiri Comillas na Comillas ihe dị ka kilomita anọ.
Obere obodo a bu nke Alfonso I malitere ma o wuru ụlọ ya n’ebe a, nke a ga-ahazi obodo a. Ọ bụ ebe anyị na-agafe ma ọ bụrụ na anyị gaa Asturias na nke ahụ dịkwa na Camino de Santiago a ma ama, n'ihi ya, ọ nwere ọtụtụ njem nlegharị anya. Otu n'ime ihe ndị anyị nwere ike ịhụ n'obodo a bụ Puente de la Maza mara mma, akwa mmiri sitere na narị afọ nke 32 nke e wuru n'elu akwa osisi kachasị ochie. Ọ nwere arches iri atọ na abụọ ma enwere akụkọ na-ekwu na ọ bụrụ na ịchọrọ ma gafee akwa ahụ na-ejide ume gị, ọchịchọ ahụ ga-emezu.
Ebe ọzọ anyị nwere ike ịhụ n’obodo a bụ Ebe obibi ndị mọnk nke San Luis, ụdị ụlọ ndị Gothic nke iwu Franciscan. Ebe ochie nke obodo ahụ na-enye anyị ọtụtụ ihe atụ nke ụkpụrụ ụlọ oge ochie, dị ka Torre del Proboste, ụlọ elu nke narị afọ nke XNUMX nke jikọtara na mgbidi ochie. Isi ihe ọzọ masịrị ya bụ ụlọ ụka Santa María de los Ángeles dị na mpaghara mgbago ugwu obodo ahụ. Otu ụlọ ụka mara mma nke ewuru ruo narị afọ nke XNUMX ma na-enye nnukwu ihe atụ nke ụdị ugwu Gothic. Ọ bara uru ịhụ ma ime ma mputa, ebe ọ bụ na ekwuputara na saịtị nke Mmasị Omenala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oyambre osimiri dị na Cantabria
Ogige 5 kachasị mma na Catalonia
Ime njem ime obodo na Galicia